Ukukhetha Ofanele izibuko - udaba nezokusigcoba kubo bonke futhi ngaso sonke isikhathi, eqinisweni, le-accessory kuyinto bakhathale ebusweni sibekwe obala umphakathi. Akekho umuntu othanda ukuthi konakalisa izici ebusweni, kungani kufanele indlela obhekene ukukhethwa amaphuzu.
Kunezinhlobo eziningana isikhunta ubuso: square, nxazonke, esingunxantathu futhi elingunxande. abathengisi abaningi abathengisa amaphuzu, uthi umbuzo ezivamile lapho ukhetha yilokhu Goggles zafanelwa esiyindilinga ubuso. Lokhu ukuma kobuso, kuvamile, ikakhulukazi phakathi kwezizwe Slavic. Ngakho ekubeni inkinga esiphuthumayo ngalokho izibuko kuphe ubuso.
Unquma kanjani ukuthi round ubuso? Kulula kakhulu ukwenza: izici ebusweni, ngokuvamile izihlathi komumo wobuso kukhona eziba nezifaca, ububanzi futhi ubuso obuphelele cishe ulingana nomunye. A round ubuso kwenza umnikazi wawo abasebasha: amantombazane kangaka abasha ngobuso round zifana kakhulu izingane.
Kodwa ethile yomuntu onjalo ukuthi sinombono izihlathi elahlekile enamehlo amahle futhi izindebe ukuthi amantombazane uzame ukugcizelela makeup.
Ngakho namanje, ukuthi izibuko abafanelekela round ubuso ukuthi yini ezilungele kangcono ukukhetha uhlobo? amaphuzu engaphandle umngcele kufanele babe ngaphansi amashiya, futhi ifomu kufanele sisekele amashiya ukugoba. Awukwazi ukuthatha izibuko isiyingi ukuma, noma "lehla", kubonelelwa kakhulu ama-umumo sikwele, noma side ku isikwele. Uma umuntu akuyona ebanzi kakhulu, kungenzeka ukuba zizame ukuma uvemvane, okungasekelwe kuphela ukudonsa ebusweni, kodwa futhi ukugcizelela emehlweni.
Esinye isici umbuzo onjani izibuko efanelekayo round ubuso, umbala. Kuleli fomu akunakwenzeka ukwenza umahluko omkhulu okhona kanye nemibala egqamile ukukhetha, njengoba lokhu ngeke nje sibe sibi isimo, ngesikhathi esifanayo i-contrast kuyadingeka, kodwa hhayi abukhali. Okukhethayo ukukhokha amaphuzu noma iyashintsha iyaphupha ibe nsundu, ungase futhi ukhethe metallics. Kuyinto lezi imibala ezibhekwa jikelele futhi Site kokubili blondes futhi brunettes.
Kodwa hhayi kuphela Uhlaka ezibukweni zamehlo, ngoba kubalulekile, njengoba kukhona ezinye izeluleko ezingakusiza uqonde onjani izibuko efanelekayo round ubuso ngesikhathi esifanayo ukuvikela kusuka imisebe yelanga. Kufanele makudle amaphuzu, okuyinto ukudlulisa emathempelini. Asebenzise namaqhinga esinjalo, ongaboni unciphise izihlathi yakho. Kubalulekile ukunaka amaphuzu ozokusiza ukuba zibukeke ukudonsa ebusweni. Ngisho e izibuko abantu ngale ndlela ebusweni akuzona amaphethini eyamukelekayo nemihlobiso zokuhlobisa, ngabo ukwenza nezinsimbi ekhethekile side imibala unadorned kodwa amahle.
Isinyathelo esilandelayo lapho ukhetha izibuko ukusuka elangeni - kuba umbala lens. Lapho une inkululeko ephelele ngoba ukuceba. Ungakhetha kokubili egqamile futhi kumnyama ejwayelekile lens. Into esemqoka - ukuba bagcine umthetho: akukho esihluke kakhulu.
Ukukhetha enkulu izibuko manje amelwe emakethe, futhi umuntu ngamunye ungathola yena okuthile eyabo. Abantu ujwayelene kwale mithetho akufanele kube umbuzo ngalokho izibuko zafanelwa round ubuso. Photo sikhangise ezinye izinketho.
Kufanele ngigxila ukuthengwa ekhishini ezenziwe ngokhuni?
Indlela yokwenza inkinobho "Maynkraft" futhi lokho kusetshenziswa